▷ Imidlalo eli-10 ephambili yeZombie kwi-Android 【Usetyenziso lwe-2020】 | Izikhokelo ze-Android
Eyona midlalo ilungileyo ye-zombie ye-Android
UCarlos Valiente | 12/11/2019 13:25 | Imidlalo ye-Android
Ngaba ukhe wanosuku olunzima emsebenzini? Ngaba iimviwo zeYunivesithi zikushiye udiniwe? Ngaba iqela lakho olithandayo lilahlekile? Ewe, ukuba ufuna ukukhupha kunye nokukhulula uxinzelelo, eyona nto sinokucinga ngayo kukubamba i-smartphone yakho kunye nokubulala iiZombi ezimbalwa.
Musa ukushiya enye iphila okanye ifile, ke makhe sibone ukuba zeziphi iindlela esinokukhetha kuzo, kwaye yeyiphi imidlalo esinokuyikhuphela ukuze sichithe ixesha elimnandi ngokudubula iZombi. Okanye ngamanye amaxesha, ukuba ungomnye wabo kunye nokutya iingqondo ezinencasa nezityebileyo zomntu zikwimeko egqibeleleyo.
1 UKUFA KWENKQUBO 2 - I-Zombie Survival Shooter
2 UNKILLED - Umdlalo wokuDubula weZPS weZombi
4 Izityalo vs Zombies ™ 2
5 IZombie Frontier 3: I-Sniper Shooter
6 I-Zombie Diary 2: Inguquko
7 Imidlalo yeMipu: iZombies-IIMPAWU EZIFILEYO
8 Ithemba lokugqibela Sniper - Imfazwe yeZombie: Imidlalo yokudubula yeFPS
9 Santa nxamnye Zombies 2
10 Ukuhamba Abafileyo Akukho Mhlaba Womntu
UKUFA KWENKQUBO 2 - I-Zombie Survival Shooter
Umthuthukisi: IMidlalo ye-MADFINGER
Masiqale nge isavenge sesibini seTrigger efileyo, apho intsholongwane ebulalayo isasazeka kwihlabathi liphela ibangela uguquko ebantwini kwaye isongele iintlobo zethu ngokuphela. Ngoku, abasindileyo besi sibetho bajoyine ukumelana nehlabathi kumlo wokulwa nosuleleko olubulalayo olungenakunqandeka… Lungiselela uhlaselo! Lixesha lokuba uqale ukulwela ukusinda kwakho kule nto Umntu wokuqala wokudubula umdlalo oza kuthatha umphefumlo wakho!
Eyona midlalo yokudubula ilungileyo ye-Android
Ungaziphucula izixhobo, ugcine abantu abasengabantu abasempilweni, kwaye nogqirha osegumbini unokukuphilisa ... Isandi, kunye nezandi ziya kukwenza ukholelwe ukuba ukulo mdlalo, kuba icacisiwe ngempumelelo enkulu, kwaye iya kukwenza uphile umdlalo ngokupheleleyo.
UNKILLED - Umdlalo wokuDubula weZPS weZombi
Imidlalo yeMadfinger iveza esinye isihloko sokuphelisa iZombi ngaphandle kokuma. Umlinganiswa wethu ophambili uJoe, a ilungu leyunithi anti-zombie WOLFPACK, Kuya kufuneka ulwe kule holocaust ye-zombie ebekwe kwisiXeko saseNew York. Injongo yakho, ngokucacileyo, kukuphelisa isoyikiso se-zombie ngaphambi kokuba sisasaze kwaye sitshabalalise bonke ubomi obaziwayo emhlabeni.
Sinayo ngaphezulu kwamakhulu amathathu emishini, kwaye sineentlobo ezininzi zezixhobo kunye nokudubula ngokuzenzekelayo kwinjongo yethu. Zonke ngaphakathi kwimizobo ephumeleleyo kwaye ikhathalelwe eya kusenza sonwabe kolu lonwabo.
Umthuthukisi: I-Mobigame SARL
Ngoku sihamba nesihloko «sokukhanya» esingaphezulu. Le tsunami yeZombi ekufuneka siyikhokele inenjongo yokutya iingqondo esizifumana endleleni yethu.
Inkampani iMobigame SARL iyasivumela ukuba sihlasele isixeko ngesiqhu esikhulu seZombi. Guqula abantu abahamba ngeenyawo abazolileyo babe ziZombi kwaye wenze elona qela likhulu likhoyo. Yitya izihlobo zakho kwaye uzicel 'umngeni kugqatso oluphambeneyo olusekwe ekonakaliseni yonke into abayifumanayo endleleni. Uqala wedwa, kodwa kwikhondo lakho elilambileyo uya kuba nakho ukuntywila ngamazinyo akho kwingqondo esempilweni, ngubani oza kukujoyina, kwaye baya kukuthwala xa ubhabha ukuze ungashiyi usempilweni.
Zombie Tsunami ngu 'imbaleki engapheliyo'ethi, ngokungafaniyo nezihloko ezininzi kuhlobo, izise into entsha. Endaweni yokulawula uphawu olunye, kuya kufuneka khokelela kumjelo weZombi inokukhula njengoko siluma abantu abaninzi.
Ngexesha lokhenketho, ukongeza kubantu abakhululekileyo abaya kuhlala bejolise kubo ngokulula, siza kubaleka kwizithuthi zeentlobo ezahlukeneyo (iimoto, iibhasi ...) kunye neminye imiqobo, esiza kudinga inani elithile leZombies xa sifuna ukubasa phambili.
UZunie Tsunami uzigqithile ngebhongo kwi Abadlali abazizigidi ezingama-200 kwihlabathi liphela.
Izityalo vs Zombies ™ 2
Izityalo vs Zombies ™ 2 Simahla
Ufakelo lwesibini lomdlalo, ovela kwisandla soBugcisa boMbane, Kwindlela yokuzikhusela kwinqaba, sinokuthi yenye yezona zidumileyo ehlabathini. Hlanganisa umkhosi wezityalo ezinamandla, ubahlawulise ngezondlo kwaye uze nesicwangciso sokugqibela sokukhusela ingqondo yakho.
Qokelela izityalo zakho ozithandayo, njengojongilanga kunye nePoashooter, kunye nekhulu labalinganiswa bezityalo kubandakanya iGuayalava yokuyila kunye neLain Bean. Ukulwa neentlobo ezininzi zeZombi ezijikeleze zonke iimbombo, njengePower Zombie kunye ne-Little Mermaid Zombie. Kuza kufuneka ukhusele ingqondo yakho kwiinkukhu ezinkulu zeZombie!
Thatha abadlali abavela kwihlabathi liphela kwaye ubone ukuba ngubani onokufumana amanqaku amaninzi kwinqanaba ngalinye. Khetha izityalo zakho kwaye udlale ukuze uphumelele, ufumane amanqaku ngakumbi ngokusekwe kumandla eqela lakho kunye nenani leZombi ozoyisayo. Betha amanqaku omchasi wakho ukuze ufumane izithsaba zokukunceda ukuba unyuke kwiibhodi eziphambili zebhola.
IZombie Frontier 3: I-Sniper Shooter
IZombie Frontier 3: I-FPS Sniper Shooter
Umthuthukisi: Imidlalo yeFT
Sijongene nolunye ubhubhane olwenziwe ngumntu. Ngenxa yophando oluyingozi lwentsholongwane eguqulweyo, izazinzulu zibangele i-apocalypse ye-zombie xa ikhangela isitofu sokugonya... Ngoku ungosindileyo ekufuneka ubulale inyambalala yezi zinto zingaswelekanga. Kuya kufuneka wenze indlela yakho ngenxa yeqela eliguqukayo, kwaye ubabulale. Uya kuba nayo iarsenal, eneentlobo ezingaphezu kwezi-XNUMX zezixhobo kulo mdlalo, ungasebenzisa ukusuka kwi-MP5, AK47, Desert Eagle, FN SCAR, HK 416, okanye ukusebenzisa iziqhushumbisi okanye ukuqhushumba ibhombu ngokuchasene nokuhlasela kwe-zombie ... Iimpu ze-Elite kunye nemipu yokubetha, awusoze ube ne-arsenal eyaneleyo okanye iimbumbulu ngeli dabi lasendle! Cwangcisa kakuhle, kwaye uphelise isoyikiso.
Ukuba uthanda imidlalo yeqhinga, unokuba nomdla kwi:
Eyona midlalo yeqhinga lomkhosi ye-Android
I-Zombie Diary 2: Inguquko
Umthuthukisi: Intaba iNtabeni
Ukuba iDayari yeZombie ibingumdlalo omnandi kakhulu apho bekufuneka ubulale zonke iZombi okhe waqubisana nazo, nakweli candelo lesibini. Kodwa ngoku uya kuba nezixhobo ezininzi, iZombies ezingakumbi zokuphelisa, kunye nokuzonwabisa ngakumbi. Inkangeleko yayo efana nekhathuni, kunye nemizobo yayo emacala mabini, iyenza ibe nomtsalane kakhulu kwaye iphantse ibe likhoboka xa kufikwa kumba wokudlala.
Umsebenzi wakho ophambili wokusinda kwinani elikhulu leZombi oza kudibana nazo kwaye kubalulekile ukuba ubulale abaninzi kangangoko unako, kufuneka uwahlangule amaxhoba owafumanayo endleleni yakho. Uya kuba nazo izixhobo ezingama-30 ezahlukeneyo kunye nenani elikhulu leZombi ukuphelisa.
Ukuba uthanda imidlalo ye-zombie kwaye ufuna ukufumana entsha kwiselfowuni, Idayari yeZombie yenye into elungileyo.
Imidlalo yeMipu: iZombies-IIMPAWU EZIFILEYO
Imidlalo yeZombie: IIJITHI ZOKUFA
Umthuthukisi: I-VNG GAME STUDIOS
Ngeli gama lingachanekanga, sinomdlalo osemgangathweni ophezulu, uxhaswe zizimvo zomsebenzisi kunye nenqanaba leenkwenkwezi ezi-4,6. Inkampani yeVNG Game Studios isiphosa kwifayile ye- Imfazwe yehlabathi yesithathu, apho iintshaba zakho sele zifile, kodwa emva ngo-2040 intsholongwane entsha enokutshabalalisa bonke abantu ...
Sinemizobo esemgangathweni esemgangathweni ye-3D kakhulu ngokubonakalayo nakwiseto sesandi esilawula ukwazisa umdlali kwimo yeapocalyptic. Ukudibana kwendalo esingqongileyo ukufumana izinto ezisivumela ukuba siqhubeke nobomi nako kuyabonakala. Kwaye ekugqibeleni ezinye iindlela ezipholileyo ezinje nge "Hunter Mode", apho sinokusebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo kwaye singene kwizinga lehlabathi apho sinokwabelana khona ngeziphumo nabasebenzisi abavela kwiindawo ezahlukeneyo zomhlaba.
Ithemba lokugqibela Sniper - Imfazwe yeZombie: Imidlalo yokudubula yeFPS
Ukuqhubeka nomxholo, kufuneka silisindise kwihlabathi kwimikhosi yeZombies ehlasela iplanethi, ngokungapheliyo. Kodwa ngoku Sizibeka kwizihlangu ze-sniper, sifumane indawo ekhuselekileyo, sisebenzise ukuzifihla ukuze singafunyanwa, kwaye sidubule.
Ngemizobo elungileyo, kunye nenqanaba eliphezulu leenkcukacha, siya kuba nakho ukubona indlela iintshaba zethu eziqhuma ngayo, okanye zibaleke ngokuchasene nezithuthi okanye izindlu, enkosi kuqhushumbo esinokuluqala ngokudubula izikhongozeli, iitanki zepetroli, njl. Ukuqokelela izixhobo ezahlukeneyo kunye namakhadi ukuphucula izakhono kunye nezixhobo, unokufumana iziqhushumbisi zerokethi ezingayi kushiya ibug engaphili ...
Umnqweno walo mdlalo kukuba uya kuba nakho ukubona umkhondo we-projectile kwaye uyiqonde indlela enefuthe ngayo kwiZombi, ekugqibeleni ubabulale, kunye «Ukubulala ikhamera yekhamera» isiphumo.
Santa nxamnye Zombies 2
Umthuthukisi: Imidlalo ye-Amphibious
Ukuthatha ithuba lokusondela kwiKrisimesi, akukho nto ibhetele kunokuzibeka ezicathulweni zikaSanta Claus kunye nokusasaza ukufa kunye nentshabalalo kwihlabathi liphela elonakaliswe ziZombi. Nika i-shots engayeki, kwaye uthabathe abafana abafileyo abakhoyo kuluhlu lwakho lwabamnyama.
Kuya kufuneka umisele umthi weKrisimesi, kodwa ngeli xesha imihombiso ngamaqhekeza abahambahambayo abafileyo, abaziphethe kakubi unyaka wonke, Awuyi kuphuza nabani na phantsi kwe-mistletoe, kwaye awuyi kuba ne-turkey yokutya ngokuhlwa namhlanje, kodwa uSanta ufikile ukugqiba ukungafi.
Asingowona mdlalo ubalaseleyo kulo mbandela, kodwa isicatshulwa esisibeka ezihlangwini zikaSanta sisenza ukuba siyikhankanye njengomdlalo onomdla, oya kusigcina sonwabile ixesha elide, ho, ho, ho, ho ...
Ukuhamba Abafileyo Akukho Mhlaba Womntu
Umthuthukisi: Imidlalo elandelayo
Asikwazanga ukulugqiba olu hlolisiso lwemidlalo ye-zombie ngaphandle kokuthetha ngaleyo iphefumlelweyo ngothotho olunempumelelo, kwaye ilandelwe zizigidi zabalandeli: "Ukuhamba Abafileyo." Esi sihloko besikho kwiVenkile yeGoogle yokuDlala ixesha elide, kodwa asiphoxi mntu, kwaye uhlaziyo lwaso rhoqo luyigcina njengeyona midlalo ikhutshelweyo kunye neyona ilinganisiweyo kwimidlalo ye-zombie.
Zininzi iinguqulelo kunye nokwahluka kwesi sihloko, kodwa kule meko sijongane nomdlalo wokudlala indima okhawulezayo apho izigqibo zakho ziya kwenza umahluko phakathi kobomi nokufa. Umlingane wakho we-adventure uya kuba UDaryl Dixon, osindileyo oyakukufundisa indlela yokubulala kwaye ungafi uzamaNangona ungasebenzisa uninzi lwabalinganiswa abaziwayo ukusuka kuthotho lwethelevishini lwentsomi, ukusinda kunye nokutshabalalisa iZombi ezisijikelezileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » Imidlalo ye-Android » Eyona midlalo ilungileyo ye-zombie ye-Android
Ungayicima njani imbali yokukhangela kuGoogle Chrome kwiselfowuni yakho ye-Android?
Kodi, enye indlela yokutya iimovie kunye nothotho simahla kumabonwakude wakho